PHP AMP Plugin - ဒေါင်းလုပ်နှင့်ညွှန်ကြားချက်များ
PHP-AMP plug-in ကိုမစတင်ခင်အကြံပေးချက် - အချို့သော CMS ဖြေရှင်းချက်များအတွက် amp-cloud.de သည်အထူးဂူးဂဲလ် AMP plug-ins များကိုတပ်ဆင်ရန်နှင့်စီမံရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ - "AMP for PHP plug-in" ကိုအစားထိုးအနေဖြင့် အောက်ပါ Google AMP plug-in များထဲမှတစ်ခုသည်သင့်ကိုစိတ်ဝင်စားလိမ့်မည်။
Blogger.com AMP ဝစ်ဂျက်ကိုထည့်ပါ
အဆင့် ၁: "AMP for PHP Plugin" ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ။
အဆင့် ၂ - AMP for PHP Plugin -ZIP ဖိုင်ကိုဖြည်ချပါ
<link rel = "amphtml" href = " http: // " $ _ SERVER ['HTTP_HOST'] ။ "/ amp / amp.php? url =" ။ urlencode (" http: // " $ _ SERVER ['HTTP_HOST $ _ SERVER ['PHP_SELF'] ။ "?" ။ $ _ SERVER ['QUERY_STRING'] ။ "") ။ "" />
AMP PHP code ဥပမာ
<?php echo " <!DOCTYPE html> <html> <head> <title> မင်းရဲ့ meta ခေါင်းစဉ် ... </title> <link rel="amphtml" href="https://".$_SERVER['HTTP_HOST']."/amp/amp.php?url=".urlencode("https://".$_SERVER['HTTP_HOST'].$_SERVER['PHP_SELF']."?".$_SERVER['QUERY_STRING']."")."" /> </head> <body> မင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရင်းမြစ်ကုဒ် ... </body> </html> ;" ?>